Les Actions De Semalt 5 Iingcebiso Èprouvés Thengisa i-Commercialiser I-Enterprise yakho kwi-L'chelle Internationale
Dlulela nayiphi na into yokuthengisa eline-intanethi, ukwandiswa kwe-couverture uthele i-integration yabaxhasi bamazwe ngamazwe. Kukho ezininzi iinkampani ezizinzileyo ezichanekileyo ezichanekileyo zeendlela ezifanelekileyo zokuthungela kwihlabathi. Ukuthengisa i-Intanethi kubandakanya ukufaka i-visibilité de votre marque vers des sommets ezintsha - ctc lebanon number. I-Engine Optimization (SEO) yintengiso ye-process of use usetyenziso lwe-intanethi kwi-intanethi ye-moteur de recherche ye-site.
Ngaphandle kokuba ulungiselele ukusabalalisa i-campagne yokuthengisa ihlabathi, qhawula ezinye iziphakamiso, zichazwe ngu-Oliver King, ophethe i-client reussite iSemalt .
1. I-Competence multiculture
Xa ufikelela kumazwe ngamazwe, it un bonne idée d'avoir un contenu de site Web enziwe ngezilimi ezininzi. Ngokuqinisekileyo, kufuneka uqonde izicwangciso zeenkcukacha kwi-zone ye-geographique. Le contenu que vous choisissez et la langue kufuneka ibe kwiimimiselo ezamkelekileyo.
Kuye kwezinye iimeko, kubalulekile ukuba uqonde i-diversité culturelle kwiintlawulo ezininzi. Abantu abahlukeneyo basebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zeefayili kwi-ligne kunye ne-hors line ukuhambisa i-tâches en ligne. Ngokomzekelo, i-des des chinois usebenzisa i-masseurs instantanés njenge-MSN Messenger okanye i-QQ Messenger kunye ne-USA esebenzisa i-WhatsApp. Dans d'autres cas, i-Chine isebenzisa ii-moteurs de recherche njengeBhaidu ngenkathi i-Europe isebenzisa i-Google.
2. Ukuzimelela ukuthengisa nge-moteur de locally
Kubalulekile ukuba ukhethe i-moteur de recherche ukuze ulungise kwi-pays international que que ciblez. Ngokomzekelo, e-Chine, yenza i-SEO usebenzise i-Web site kwi-Baidu okanye indawo yakwaGoogle ingaba yi-idée evable. Xa ufuna i-niche, abanye bathetha ukukhetha i-Yahoo okanye i-Bing. I-contents kufuneka ihlale kwindawo yayo kodwa nayo ifanelekile kunokwenzeka. Okokuqala ukusuka kwii-keywords ezikhoyo..
3. Comprendre les lois regionales
Kuzo zonke i-region, i-lois ilawula indlela yokuthengisa ngayo i-reglementés, i-annoncés et vendus. Ngokomzekelo:
Uhlawula kufuneka avume ukuphakanyiswa kwezinto ezithile kunye ne-contrôler. Ngokomzekelo, i-publicité comparing ingaba ilégale dans ezithile zihlawula.
I-Reglementation des tactiques de vente
Uhlawula uvumela ezinye iinkcukacha ze-tactics ezikhankanyelwe ukuphakanyiswa kweentengiso. Lezi ndlela ezifana ne-tirages okanye i-sort, i-concours kunye ne-transactions zi-reglementés par le pay.
I-Tactics yokulawula i-product
I-pays dans lequel vous vendez le produit kufuneka ikhulule ekusebenzisaneni kwayo, kwiimpawu zayo zokhuseleko, kunye neenkqubo zokuphepha kunye ne-norms regulations.
4. Ukulungelelanisa umxholo wewebhsayithi
I-UX kufuneka ibe yinto ebalulekileyo ekuqwalaseleni ngexesha lokulungiselelo lwe-site yeWebhu ukuthungela uluntu jikelele. Les couleurs du site Web kufuneka zibonise iinkcubeko ezifana ne-intporez kwi-strategy yakho yokuthengisa ihlabathi. Kwi-cas d'un site / d'une application kunye ne-gateway de paiement, i-API ye-processor de paiement kufuneka ithathe iindleko zokuguqulwa kweenguqulelo zabo kwi-conceptive de leur origine. La vitese de chargement doit être élevée kwiziko leWebhsayithi.
5. I-Adopter yokuthengisa i-médias sociaux (SMM) kwiilwimi ezahlukeneyo
Ii-medias sociaux zinokukhetha ukhetho lwendawo. Uncedo idée est d'utiliser des tactiques SMM ezifana ne-publicité ciblé.
Dlulisa yonke i-intanethi kwi-online, i-nécessité yokubeka i-potential potential de-market inokuphepha kunye neyokulunga ngokuqhelekileyo yinjongo ephambili. Beaucoup d'entrepreneurs uthengisa i-veloir ukuvelisa zabo iinkampani ngokufumana i-marque globale. I un des des moyens les plus efficaces ukutsala i-website yeWeb kwi-intanethi ye-intengiso ye-Intanethi. Sebenzisa iziphakamiso ezikhankanyiweyo kule nqaku, kunye ne-marque ira globalale kwi-toolkit zokuthengisa ezilula ezifana ne-referencement.